Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 9.3.2 | IPhone nhau
Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 9.3.2
Yekuvandudza vhezheni yakafambiswa rimwe zuva, yeruzhinji vhezheni yakafambiswa rimwe zuva: Apple ine yakaburitsa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 9.3.2. Kuburitswa kwakauya mazuva matanhatu chete mushure meiyo yapfuura beta uye ndiyo yechipiri inowanikwa pachena kune iOS 9.3.2. Iyo yekudzoresa yave kuwanikwa kubva kuApple yekuvandudza nzvimbo uye ichaonekwa, kana usati watoita zvakadaro, kuburikidza neOTA kune vese vashandisi vakanyoresa kuApple beta chirongwa.
Senguva dzose, iti kwete tinokurudzira kuiswa yeiyi kana imwe software muchikamu chekuyedza kunze kwekunge iwe uri vagadziri kana uchiziva matambudziko aungatarisana nawo. Kunyangwe iOS 9.3.2 isingasanganisi shanduko huru, panogara paine mukana wekuti iwe ugoona njodzi dzekushandisa, kushomeka kwemvura kana kusagadzikana kwesisitimu.
Beta yechitatu yeIOS 9.3.2 inosvikawo pachena
Shanduko chete yakakosha mune ino nyowani beta iri kutaurwa nezvayo mukana wekushandisa Night Shift uye simba rekuchengetedza mode panguva imwe chete. Sezvandareva mune dzakasiyana shanduro dzevagadziri, iyi inofanirwa kunge iri yazvino vhezheni yeIOS 9, chero bedzi vasingawani imwe yakakomba chengetedzo yekukanganisa iyo yavanofanira kugadzirisa. Parizvino, vagadziri veApple vachange vachitarisana neIOS 10, OS X 10.12, watchOS 3, uye tvOS 10.
Kana kunyangwe yambiro yedu iwe uchida kuyedza iyi uye mamwe maApple betas, unogona kutevedzera dzidziso yatakaburitsa panguva iyoyo Maitiro ekunyorera kuti uise iOS 9 yeruzhinji beta. Kana iwe ukaiisa iyo, iyo yatinosimbirira kuti hatikurudzire nekuti haina kusanganisira yakakosha nhau uye iri vhezheni muchikamu chekuyedza, usazeze kusiya zvaunofunga mune zvakataurwa uye, sezvinei, chii chakaita kuti iwe usarudze kuisa izvi shanduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 9.3.2
Hangouts inogadziridzwa nekuwedzera kuwedzerwa kutsva paIOS
Ndiwo iwo masikirwo eiyo iPhone 7 Pro?